Akaburitsa screenshots anoratidza OnePlus 9 Pro kiyi specs uye nyowani kamera UI
Iyo OnePlus 9 yakatevedzana inotarisirwa kuvhurwa mwedzi uno. Runyerekupe rwakataura kuti kuchave nemhando nhatu - iyo Oneplus 9 Pro, iyo OnePlus 9, uye yechitatu modhi ine zita risina kusimbiswa asi yakanzi OnePlus 9E, OnePlus 9 Lite, uye OnePlus 9R. Kuburitswa kutsva kwabuda kunoratidza zvakakosha zvakatemwa zveOnePlus 9 Pro. OnePlus haina kuvhura OnePlus 8T Pro… [Verenga zvakawanda ...] nezve Leaked screenshots inoratidza OnePlus 9 Pro kiyi specs uye nyowani kamera UI
OnePlus Tarisa: Zvese zvatinoziva kusvika zvino
OnePlus 'inouya smartwatch ine chimwe chinhu chenhoroondo refu. Kusvika muna 2019, yaive 'kuda ivo, havadaro' runyerekupe rwakanga rwafamba kwemakore. Asi nekambani inosimbisa kuti wachi iri kuiswa mukugadzirwa, ikozvino yatopfuura runyerekupe. Kunyange paine zvakawanda zvisingazivikanwe, isu takanzwa zvakawanda nezve OnePlus Watch, uye seruzivo rwakawanda ... [Verenga zvakawanda ...] nezve OnePlus Tarisa: Zvese zvatinoziva kusvika zvino